BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Q:23aad | FooreNews
Home wararka BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Q:23aad
BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Q:23aad
Adeegyada aasaasiga ee caafimaadka iyo waxbarashada waxa loo daadejiyay degmooyinka Burco, Boorama iyo Berbera. Waxa kale oo la sii xoojiyay isku xidhnaanta bulshada iyo maamullada dawladaha hoose. Xisbigu KULMIYE muddo-xileedka labaad:
1. Waxa uu xoogga saari doonaa sidii adeegyada loogu sii dhawayn lahaa bulshada ku dhaqan dhammaan degmooyinka dalka, gaar ahaan adeegyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha, tamarta, iyo nabadgelyada.
2. Waxa uu daadejin doonaa maaliyadda si waafaqsan Dastuurka, isla markaana la jaanqaadaysa Barnaamijka Dib-u-habaynta Maaliyadda.
3. Waxa uu abuuri doonaa jawi isku xidha maamullada dawladaha hoose, ganacsatada iyo ururrada bulshada iyada oo si wadajira loo abuurayo jawi sahlaya ganacsiga maxalliga ah oo horseedi kara horumar ballaadhan.
4. Waxa uu xoojin doonaa maamulka goballada si waafaqsan Xeerka Is Maamulka Goballada iyo Degmooyinka, si loo helo dhisme gobol oo isku duwa qorshayaasha gobolka, adkeeyana nabadgelyada iyo isku xidhnaanta bulshada.
5. Waxa uu degmooyinka oo dhan u samayn doonaa qorsheyaal horumarineed oo degmo walba baahideeda si gaar ah uga jawaabta.
6. Waxa uu adkayn doonaa ka qayb qaadashada bulshada ee dhinacyada go’aan qaadashada iyo la xisaabtanka si loo helo Gole deegaan iyo maamul degmo oo ka turjumaya baahiyaha bulshada.
7. Waxa uu is waafajin doonaa qorshaha maamul daadejinta iyo xeerarka maamul daadjinta si loo helo shuruuc is waafaqsan oo fududeeya hawlaha maamul daadejinta.
8. Waxa uu dardargelin doonaa nidaamka kala xadayta goballada iyo degmooyinka.
Tiirka 7aad: Deegaanka Iyo Isbeddelka Cimilada
Xisbiga KULMIYE waxa uu aaminsan yahay in deegaanku yahay laf- dhabarta nolosha aadamaha. Waxa kale oo uu rumaysan yahay in aafooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda sida abaaraha iyo daadadku ay caqabad ku yihiin horumarka dalka iyo nolosha dadka iyo duunyadaba. Waxa deegaanka hadimooyin ku haya nabaad-guurka, isbeddelka cimilada, magaalaynta iyo xaalufinta dhirta.
Xisbiga KULMIYE waxa uu hawl weyn ka qabtay dib-u-soo-noolaynta dhulkii xaalufay, horumarinta seerayaal ay ka mid yihiin Gacan- Libaax, Debis iyo Geed-Deeble. Waxa la baabi’iyey seerayaal si sharci darro ah loo ooday oo ku yaalla Hawd, Maroodijeex, Daad-madheedh, Togdheer, Saaxil, Saraar iyo Sanaag. Sidoo kale, waxa la sameeyey
xeerar ay ka mid yihiin Xeerka Kaymaha iyo Duurjoogta, Xeerka Maaraynta Deegaanka Dalka, Xeerka Maaraynta Qashinka Dalka.
Muddo-xileedka labaad, Xisbiga KULMIYE waxa uu ahmiyad weyn siin doonaa daryeelka iyo horumarinta deegaanka iyo la-qabsashada isbeddelka cimilada, waxaanu qaadi doonaa tallaabooyinkan soo socda:
Xeerarka, siyaasadaha iyo nidaamka deegaanka
1. Waxa uu kor u qaadi doonaa awoodda waxqabad ee Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer-Miyiga iyo hay’adaha kale ku hawlan deegaanka iyo maareynta masiibooyinka.
2. Waxa uu dhiirrigelin doonaa barashada culuunta deegaanka iyadoo loo marayo warbaahinta iyo manhajka waxbarashada dalka.
3. Waxa uu dejin doonaa siyaasadda iyo xeerarka dhulka, degsiimooyinka, daaqsinta iyo isbeddelka cimilada.
1. Waxa uu xakamayn doonaa jarista dhirta, waxaanu yarayn doonaa adeegsiga dhuxusha isaga oo dhiirrigelin doona tamarta beddelka u noqon karta dhuxusha.
2. Waxa uu kordhin doonaa seerayaasha, waxaanu u dhammaystiri doonaa dhammaan kabayaasha ay u baahan yihiin si loo helo calaf ku filan xoolaha iyo mid keyd ah ba.
3. Waxa uu u samayn doonaa xirfado dadka ku hawlan baabinta dhirta (Dhuxusha).
4. Waxa uu horumarin doonaa hannaanka dhaqan-dhaqaale ee reer miyiga si loo yareeyo ku tiirsanaantooda dhirta iyo dhuxusha.
5. Waxa uu hirgelin doonaa barnaamij dib loogu dhiraynayo deegaannada xaalufku ku dhacay.
6. Waxa uu ilaalin doonaa, isla markaana horumarin doonaa deegaannada dalxiiska ku habboon sida Daalo, Gacanlibaax, Laas- geel, Gudmo-biyo-cas, Taleex iyo Sacaadaddiin.
7. Waxa uu degmooyinka ku fidin doonaa xarumaha dhir-kobcineedka ah.
8. Waxa la abuuri doonaa Ciidanka Ilaalada Deegaanka iyo Dhirta.
9. Waxa uu daryeeli doonaa isla markaana ilaalin doonaa dhirta halista ugu jirta dabar go’a sida geedka Galoolka.
Maaraynta Masiibooyinka Dabiiciga ah
Xisbiga KULMIYE isaga oo maanka ku haya isbeddelka Cimillada Adduunka, waxa uu waajib Qaran ka dhigi doonaa u diyaar garowga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah. Si taasi u hirgasho, Xisbiga KULMIYE: ….. La Soco Qaybta Ugu Dambaysa Iyo Isniinta
Previous PostWajiga Qarsoon Iyo Xiisaha Ku Duuggan Taariikhda Saddexda Murashax-Madaxweyne Ee Somaliland- Sooyaalkooda Taariikheed, Da’dooda, Aqoontooda, Khibradooda Shaqo, Hiwaayaddooda Iyo Shakhsiyadda Dhabta Ah Ee Mid Kasta -- Q:2aad Next PostWarbaahinta Ingiriiska Oo Baahisay In Somaliland Noqotay Goobtii Ugu Horeysay Afrika Ee Doorasho Loo Isticmaalayo Tiknolajiyadii Ugu Casrisanayd